जसले मन्त्री बनाए उसैलाई लात, गिरीले गरे कोइरालालाई घात - TV Annapurna
जसले मन्त्री बनाए उसैलाई लात, गिरीले गरे कोइरालालाई घात
January 8, 2017January 9, 2017 Annapurna TV	टिभी अन्नपूर्ण
काठमाडौं, २४ पुस । भनिन्छ, मान्छेको स्वार्थ पुरा भएपछि उसले पछाडि फर्केर हेर्दैन । यो स्वार्थी दुनियाँ भएकाले सबै आ आफ्नो दुनो सोझ्याउँछन् । अहिले यस्तै भएको छ कांग्रेसभित्र । जसले मन्त्री बनायो उसैलाई लात हान्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ कांग्रेसमा ।
पछ्रिल्लो समय सिंचाई मन्त्री भएका दीपक गिरीले आफ्नै पार्टीका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई लात हानेका छन् । उनै कोइरालाको चाकडी गरेर मन्त्री बन्ने अवसर पाएका सिंचाई मन्त्री गिरीले कोइरालाको कुरा हिजोआज नसुन्ने गरेको कांग्रेसभित्र चर्चा छ । स्वार्थ पूरा भएपछि मान्छे कतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण सिँचाइमन्त्री दीपक गिरीले दिएका छन् । दाङबाट चुनाव जितेका गिरी मन्त्री बन्नुअघिसम्म महामन्त्री शशांक कोइरालाका खास मान्छे थिए । तर, अहिले यी दुईबीचको सम्बन्ध चिसो भईसकेको छ ।
कोइराला र गिरीको सम्बन्ध निकै घनिष्ट थियो । गिरीलाई कोइरालाका विश्वास पात्र भनेर चिनिने गरिन्थ्यो । तर अहिले दुवैको सम्बन्ध पानी बाराबारको जस्तै भएको कांग्रेसीहरुले बताउने गरेका छन् । नयाँ सरकार बनेपछि पार्टी भित्रको भागबन्डामा कोइरालाले आफूले पाएको एकजनाको कोटामा गिरीलाई नै मन्त्री बनाए । टोखामा कोइराला र गिरीको घर सँगै जोडिएको अवस्थामा छ । यतिसम्मकी कोइराला बिरामी हुँदा कार्यकर्ताको भीड गिरीको घर सम्मै हुने गर्दथ्यो ।
मन्त्री भएपछि गिरीले कोइरालाले भनेका कुनै काम नगरेपछि दुवैको सम्बन्ध बिग्रिएको हो । सिँचाई मन्त्रालयअन्तर्गत नै इन्जिनियर रहेका कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूका भाइलाई सुदूरपश्चिममा सरुवा गरिदिन कोइरालाले गिरीलाई भनेका थिए, तर उनले टेरपुच्छर नै लगाएनन् । पछि दिलेन्द्र बडूले सभापति शेरबहादुर देउवाकै पावर भिडाएर भाइको सरुवा गराएका थिए ।
मन्त्री गिरीले पनि आफूले चाहेर भन्दा बाध्यताका कारण नेताहरूको सिफारिस मान्न नसकेको बताएका छन् । मन्त्री गिरीले सरुवा बढुवाको कामका लागि पहिल्यै सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई ठेक्का दिएका छन् । सरुवा बढुवाका काममा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने शर्तमा सचिव ठाकुरसँग मन्त्री गिरीले पहिले नै करोडौं रुपैंया उठाईसकेको बताईन्छ ।
आफूले मन्त्रीलाई पैसा बुझाइसकेकाले सचिव ठाकुरले मन्त्रीले भनेअनुसार नभएर आफ्नो इच्छाअनुसार सरुवा बढुवाका काम गर्ने गरेका छन् । ठेक्का लिएपछि नेताले भनेअनुसार काम सचिवले नगरिदिएपछि मन्त्रीसँग आफ्नै नेताको सम्बन्ध बिग्रिएको बताइन्छ ।
कोइरालामार्फत नै आफ्नो साथीको काठमाडौंम सरुवाका लागि केही दिनअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल मन्त्री गिरीकोमा पुगेका थिए, तर उनले पोखरेलको काम पनि गरिदिएनन् । सिँचाइमा काठमाडौंलाई थन्क्याउने ठाउँका रूपमा बुझिन्छ । यस्तो ठाउँमा पनि सरुवा गर्न नमानेकाले कोइरालाले गिरीलाई आफ्नो ग्रुपबाट हटाएका छन् । सिंचाई मन्त्री भएपछि गिरीले अहिलेसम्म खासै राम्रो काम गर्न सकेका छैनन् । काम भन्दापनि गिरीको धन्दा कमाउनेमै बढी केन्द्रित छ ।
राजनीति, समाचार	Post navigation
प्राधिकरण कार्यालय भवन शिलान्यासमौसमी राडर राख्ने तयारी
राजनीति समाचार One thought on “जसले मन्त्री बनाए उसैलाई लात, गिरीले गरे कोइरालालाई घात”	pramod Giri January 9, 2017 at 12:49 pm यो गलत समाचार सम्प्रेसन गर्ने प्रित पत्रकारिताको मसिहा हुन ।मन्त्री गिरीले गरेको काम देखेर डाह गर्ने चोर नेताहरूको बनावटी लेख हो । यसमा कुनै भ्रममा नपर्न सबैमा जानकारी गराउछु ।
Reply LeaveaComment Cancel reply	ताजा अपडेट	खारेज हुने कार्यालयका भवन धमाधम निर्माण हुँदै